‘पार्टी विरोधी काम गर्ने, विपक्षीलाई भोट हाल्ने अनि एमाले नै हूँ भन्ने ? –ओली - Baikalpikkhabar
‘पार्टी विरोधी काम गर्ने, विपक्षीलाई भोट हाल्ने अनि एमाले नै हूँ भन्ने ? –ओली
२० असार/ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका मान्छे एमाले हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले भने– अब पार्टी कठोर बन्छ, विपक्षीलाई भोट हाल्ने अनि एमाले नै हूँ भन्ने ?
काठमाडौँ– नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनबारे अदालतबाट फैसला आउने बेलासम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए माधव नेपाल पक्षका नेताहरू एमाले हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि हस्ताक्षर फिर्ता नलिए हस्ताक्षर गर्नेहरू पार्टीका नेता हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन ज–जसको हस्ताक्षर कायम रहन्छ ती पार्टीका कार्यकर्ता हैनन् । त्यसले नै कित्ताकाट गरिसक्यो नि । भ्रम पाल्न आवश्यक छैन ।’
अध्यक्ष ओलीले पार्टीको पक्षमा बोलिरहेका व्यक्ति मात्रै पार्टीको नेता हुने समेत बताए । उनले पार्टीको विरोधमा काम गर्नेहरू एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता हुन नसक्ने बताए ।
आइतबार, २० असार, २०७८, बिहानको ०८:३४ बजे